Sava-lalana momba ny Iran Inside Out · Global Voices teny Malagasy
Sava-lalana momba ny Iran Inside Out
Voadika ny 25 Jolay 2018 3:39 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny avrily 2008)
Shaghayegh Azimi no fehin'izay lazaina matetika ato amin'ny Global Voices ho “bridge-blogger” [bilaogera-tetezana fampitana]; olona mampiasa ny bilaoginy mampita na mampifandray kolontsaina roa na maro. Fa misy zavatra iray voamarika – tsy tena bilaogera i Azimi. Amin'ny maha-mpamokatra filma taloha azy tao Iran, ny lahatsary hatrany no nosafidianany ho fitaovam-panehoan-kevitra. Ary tsy irery izy. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny alalan'ny Skype no nilazan'i Azimi fa tanora an'arivony no mangetaheta te-ho mpanatontosa sarimihetsika, saingy noho ny fahavitsian'ny fitaovana azo ampiasaina, sy ny fahavitsian'ny fantsona fampielezana, dia izay tena mahay tsara indrindra, sy tsara vintana indrindra, na izay mahalala olona betsaka indrindra ihany no afa-mizara ny asany amin'ny mpijery ao an-toerana. Ao amin'ny Fetiben'ny filma fohy ao Iran, izay tena vitsy amin'ireo an-jatony atolotry ny te-ho mpanatontosa sarimihetsika ihany no aseho. Ahoana ny amin'ny hafa rehetra? Hoy i Azimi nanontany.
“Tsy mety hita mihitsy ry zareo fa izay namana sy fianakaviana vitsy ihany no mahita.”
Miovaova ny fitsipiky ny fanatontosana filma manerana izao tontolo izao, indrindra raha manatontosa filma fanadihadiana. Izay fitaovana lafovidy taloha tsy maintsy nilaina handraisana ny feo, ny sary ary ny fikirakirana hanitsiana azy ireny dia efa azo tanterahina amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny solosaina finday sy fakantsary video an'arivony dôlara. Ankoatra ny fiovana amin'ny famokarana, efa nanetry ny sakana fidirana ho mpanatontosa filma ihany koa ny fomba fampielezana vaovao. Ny fahombiazan'ny fampisehoana an'aterineto tahaka ny Ask a Ninja, Rocketboom, ary ny Alive in Baghdad ihany koa no maneho fa tsy hoe hoavin'ny aterineto ihany ny lahatsary – fa efa ao mihitsy izany.
Koa raha efa anjatony ireo tanora iraniana mpanatontosa sarimihetsika no mampiasa ny lahatsary ho fanehoana ny zavamisy ao Iran araka ny ahitan-dry zareo azy, ary raha tanora an-tapitrisany afa-miditra aterineto haingam-pitosaka manerana izao tontolo izao no mitily aterineto ijerena lahatsary vaovao, dia nahoana moa ireo vondrona roa ireo no tsy hifankahita?
Ny antony angamba dia tsy nampanfantarina ny andaniny ny ankilany. Ary izay no maha-zavadehibe ny anjara toerana raisin'i Shaghayegh Azimi amin'izao fotoana. Miaraka amin'ny fanampian'ny vatsy kely atolotry ny Rising Voices, izy no hanazava amin'ny mpanatontosa filma iraniana ny fomba azony ampiasana ny bilaogin-dahatsary hampielezana ny filma fohy sy ny lahatsary fanadihadiana avy amin-dry zareo amin'ireo mpijery iraisampirenena. Vantany vao vonona an-tserasera ny lahatsary, tian'i Azimi koa izany hisy dikantsoratra amin'ny teny anglisy (sy amin'ny fiteny hafa) sy hiely amin'ny alalan'ireo tambajotra mpizara lahatsary.
Varavarankelin'ny sary mihetsika ny Iran Inside Out hamela ireo monina ivelan'ny firenena hampitodika ny kamerà videô sy hizara ny fiainany amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny bilaogy tetikasany i Shaghayegh mamariparitra ny sasantsasany amin'izay tiantsika ho hita tsy hoela, ka ao anatin'izany pikantsarin'ny sehatra underground heavy metal ao Iran sy ny eritreritra manokana amin'izay mety ho dikan'ny ady ifanaovan'i Etazonia sy i Iran ho an'ny mpanatontosa filma singany tahaka azy.
Mitovy tsara mihitsy ny fotoana lanin'i Shaghayegh tany Etazonia sy tany Iran ary nolazainy fa nandany fotoana maro nandritra ny nianarany izy hiaro ny “tanindrazany” andaniny amin'ny mponina ao ankilany. Ny fahasamihafana lehibe, araka ny fanamarihany, dia raha saiky maharaka ny fivoarana ara-kolontsaina sy ara-politika avokoa ny Iraniana, dia Amerikana maro no tsy mahita akory an'izany Iran izany ao amin'ny sarintany.
Tanàna iray manerantany ny aterineto, saingy rehefa misafidy izany araka izany ihany isika. Mamoaka ny tanany i Shaghayegh Azimi, miandry ny hampahafantatra anao amin'ireo mpifanolo-bodirindrina vaovao sasantsasany. Nahoana moa raha misantatra ny resaka dia mampahafantatra ny tenanao?
10 ora izay